Mohamed Salah Oo Guushii Saddexaad Oo Xidhiidh Ah Ku Hogaamiyay Xulkiisa Masar Iyo Natiijooyinka Kulamadii Kale Oo Dhan. - Gool24.Net
Mohamed Salah Oo Guushii Saddexaad Oo Xidhiidh Ah Ku Hogaamiyay Xulkiisa Masar Iyo Natiijooyinka Kulamadii Kale Oo Dhan.
Xulka qaranka Masar ayaa kaalinta kowaad kaga soo baxay Group A kadib markii ay guul raaxo leh ka gaadheen dhigooda Uganda. Xulka Masar ee dalkoodu marti galinayo koobka qaramada Afrika ayaa shaqadooda qaybsaday qaybtii hore ee kulankan.
Xulka Masar ayaa kulanka ugu danbeeyay ee Group A ciyaarayay iyaga oo hore u xaqiijistay booskooda wareega 16ka tartanka qaramada Afrika laakiin waxay u tartamayeen in ay kaalinta kowaad kaga soo baxaan groupkooda.
Mohamed Salah ayaa gool laaga xorta ah ku yimid oo qurux badan waxa uu xulkiisa hogaanka ugu dhiibay daqiiqadii 36 aad markaas oo uu goolhayaha Uganda kaga jaabsaday kubbad uu meel aad uga baxsan xerada ganaaxa uu darbo laaga xorta ah ka soo tuuray.
Goolka uu Mohamed Salah dhaliyay waxa uu xulkiisa Masar siiyay fursada ay ciyaarta awoodeeda kula sii wareegeen iyada oo Uganda awoodi kari wayday in ay cadaadiska jamaahiirta iyo ciyaartoyda Masar u adkaystaan.
Intii lagu jiray dhawr daqiiqo oo dheeri ah ee dhamaadkii qaybtii hore xulka Masar ayaa shaqadiisa kulankan dhamaystiray kadib markii uu Ahmed El Mohamady dhaliyay goolka niyadjabka wayn u keenay Uganda kaas oo uu caawiye ka ahaa Ayman Ashraf.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0 uu xulka Masar hogaanka ku hayay isla markaana ay ku taagnaayeen guul ay u qalmeen.
Laakiin qaybtii labad ee kulankii Masar iyo Uganda ayaa ahaa mid aan wax badan laga samayn maadaama oo ay natiijada ciyaartu xili horeba u muuqatay mid lagu kala baxay.
Kulamada kale ee laga ciyaaray tartanka qaramada Afrika waxaa waji gabixii ugu xumaa la kulmay xulka Nigeria kaas oo guuldaro u qaadan waa ahi ka soo gaadhay xulka jasiirada Madagascar oo 2-0 ku jiidhay Nigeria.
Madagascar ayaa markii abid ugu horaysay u soo baxday wareega 16ka kooxood ee koobka qaramada Afrika laakiin xulka DR Congo ayaa isna ku barbartay dhigiisa Zimbabwe oo ay 4-0 u xambaariyeen.
Dhinaca kale xulka Guinea ayaa rajadiisa koobka qaramada Afrika soo nooleeyay kadib markii ay guul 2-0 ah ka gaadheen Burundi.
Natiijooyinkii Kulamadii Koobka Qaramada Afrika: